यस्ता छन् महिलाभित्र लुकेका रोचक कुरा,जुन थाहापाउनुहोस् ! « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
नारीहरू भगवानद्वारा सृजित सबैभन्दा अद्भुत शक्ति हुन्। कुनै पनि देशको महानता र संस्कृतिमा नारीको विशेष स्थान हुन्छ र हाम्रो वेदमा पनि नारीको विशेष स्थान छ ।
आज हामी तपाईलाई महिलासँग सम्बन्धित केही रोचक कुराहरु बताउँदैछौं, जसको बारेमा थाहा पाउँदा तपाईको आँखा रसाउनुहुनेछ किनभने यी सबै तथ्य तपाईका लागि बिल्कुलै नयाँ छन् र त्यसैगरी मानिसहरु जे भए पनि महिलाहरु बारे जान्न उत्सुक हुन्छन्, त्यसैले आज हामी तपाईलाई केहि रमाइलो कुराहरु बताउनेछौ ।
-केटीहरु लाई बुझ्न सजिलो छैन, त्यसैले केटाहरु भन्छन् कि भगवानले पनि केटीहरु लाई बुझ्न सक्दैन भने, हामी के हो?
-केटीहरूको मनमा के हुन्छ भनेर कसैले पनि थाहा पाउन सक्दैन, किनकि उनीहरू आफ्नो मन लुकाउन राम्ररी जान्छन्।
-महिलाहरुका केहि यस्ता कुराहरु हुन्छन् जुन उनीहरुलाई पनि थाहा हुँदैन ।
-हरेक नारी सुन्दर भएतापनि २% महिला मात्र पूर्ण आत्मविश्वासका साथ आफूलाई सुन्दर ठान्ने गर्छन्, बाँकीलाई आफ्नो सुन्दरताको प्रमाणपत्र अरुबाट चाहिन्छ ।
-महिनावारी हरेक महिलाका लागि निकै पीडादायी हुन्छ र के तपाईलाई थाहा छ एक महिलाले आफ्नो जीवनको औसत ४ वर्ष महिनावारीको पीडामा बिताउँछन् ।
-के तपाईंले कहिल्यै अनुमान गर्नुभएको छ कि एउटी महिलाले कतिवटा बच्चा जन्माउन सक्छिन्र् ? हुनसक्छ १०, १५, २० तर तपाईलाई यो थाहा पाउँदा छक्क पर्नुहुनेछ कि सबैभन्दा बढी बच्चा जन्माउने कीर्तिमान राख्ने महिलाले कुल ६९ बच्चा जन्माएकी छिन् ।
-एक अनुसन्धानका अनुसार पुरुषको तुलनामा महिलाको जिब्रोमा धेरै टेस्ट बड (टेस्ट बड) हुन्छ । यस कारण, तिनीहरूसँग स्वाद गर्न अधिक क्षमता छ।
-एक अनुसन्धानका अनुसार औसतमा पुरुष दिनमा ६ पटक झूट बोल्छन्, जुन महिलाको तुलनामा दोब्बर हुन्छ, अर्थात् महिलाभन्दा पुरुष बढी झूट बोल्छन् ।
-झुट बोल्नमा पुरुष पहिलो र रुनेमा महिला । एक महिला वर्षमा औसत ३० देखि ६४ पटक र पुरुष ६ देखि १७ पटक रुन्छिन् ।महिलाले मात्रै तयारी गर्न बढी समय लिदैनन्, तर के लुगा लगाउने भनेर सोच्न पनि पुरुषको तुलनामा बढी समय बिताउँछन् ।
-एक अध्ययनका अनुसार हरेक महिलाले आफ्नो जीवनको एक वर्ष कस्तो लुगा लगाउने भन्ने सोचमा बिताउँछन् ।गफमा पुरुषभन्दा महिला सधैं अगाडि हुन्छन् ।
-सबै नारी समान नहुने भएपनि महिलाहरु पुरुष भन्दा बढी बोल्छन् । अध्ययनका अनुसार एक महिलाले दिनमा औसत २०,००० शब्द बोल्छिन्, जुन पुरुषको तुलनामा १३,००० बढी हो। जसमा पुरुषभन्दा महिला अगाडि छन् ।
-आँखा झिम्काउनु पनि ती मध्ये एक हो । पुरुषहरु एक मिनेटमा ११ पटक झिम्काउँछन् भने महिलाहरु एक मिनेटमा १९ पटक झिम्काउँछन् ।
-सौन्दर्य बढाउन क्रिम लगाउने बारेमा तपाइले धेरै सुन्नु भएको होला तर पुरातन समयमा रोमका महिलाहरु सौन्दर्य बढाउन योद्धाहरुलाई पसिना दिने गर्दथे ।
-डरलाग्दो र भावनात्मक सपनाको कुरा गर्ने हो भने यसमा पनि महिला पुरुषभन्दा अगाडि छन् । उनीहरुमा पुरुषको तुलनामा यस्ता सपना बढी हुन्छन् ।